थप – Page2– Jagaran Nepal
म सु’तेको थिए , मेरी श्रीमतिले मेरो टाउको मालिस गरीरहेकी थिइन ,म बिस्तारै – बिस्तारै निदाए जागेपछी उनले निधारमा भिक्स लगाइदिइन मेरो आँखा खुल्नासाथ उनले सोधिन केही आराम मिल्यो कि नाइ मैले मिल्यो भनेर टाउको हल्लाए फेरि उनले सोधिन कि , खाना खानुहुन्छ मलाई भोक लागेको थियो मैले भने खान्छु ”उनले फटाफट रोटी , सब्जी […]
अचम्मको नशा:म बिहान ओछ्यान बाट उठे, अचानक मेरो छाती दुख्न थाल्यो। मलाई मुटुको बिरामी त भएको हैन? यस्तो सोच्दै म अर्को कोठा बैठक रुममा गए। त्यहा पुरै परिवार आआफ्नो मोबाइलमा ब्यस्त थिए । मैले श्रीमतिलाई हेर्दै भने: आज छाती अरुदिन भन्दा धेरै नै दुखिरहेको छ .. डाक्टर सँग परामर्श लिएर आउछु ।हुन्छ जाँदा बिस्तारै जानुहोस […]
धार्मिक ब्यूरो । ज्योतिषमा शनिलाई प्रभावशाली ग्रह मानिन्छ। नौ ग्रहहरूमध्ये शनिलाई न्यायकर्ता भनिन्छ। कर्म र न्यायका देवता शनि जनवरी बाट अस्ताउँदै छन् र फेब्रअरी २०२२ मा उदय हुनेछ। शनि ग्रहण करिब ३३ दिन अस्ताउँदैछन् । ४ राशिका व्यक्तिका लागि शनिको अस्ताउने समय कष्टप्रद साबित हुन सक्छ। यो शनिदेवको अस्ताउने समय कुल ३३ दिनको हुनेछ। यी […]
विवाहले केवल दुई व्यक्तिलाई मात्र सम्बन्धमा गाँस्दैन यसले दुई परिवारलाई पनि जोड्दछ । विवाहपछि धेरै जिम्मेवार बन्नु पर्ने भएकाले पनि मानिस परिपक्व हुन आवश्यक छ । विवाह गर्ने उमेर पनि परिपक्व हुनु पर्दछ । कति उमेरमा विवाह गर्नु उत्तम ? नेपालमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष अगावै पनि कतिपयको विवाह भएको पाइन्छ । तर हालै […]
युट्युबको खहरेले बगाएका अघोरी बाबा, कहाँ गईन श्रीमती?
युट्युबरको माध्यमबाट चर्चामा आएका एक पात्र हुन्, आफूलाई अघोरी बाबा बताउने विजय केसी । उनी युट्युबको ‘गरम मसला’ बनेपछि रातारात भाइरल भए । भाइरल भएपछि उनी ‘रक गायक’ समेत बनेर चिनिन खोजे । आफूलाई अघोरी भन्‍ने केसी मानव जीवनका कामवासना र यौन दर्शनका बारेमा प्रवचन दिन थाले । विजय केसी यतिमा मात्र अडिएनन् । युट्युबमा […]
काठमाडौँ । नेपालमा जारी १३औं दक्षिण एसियायी खेलकुद (साग) अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा बंगलादेशले आफ्नो पहिलो खेलमा १०९ रनको बिजयी सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा बंगलादेश यु–२३ टोलीले टस जितेर ब्याटिंग गर्दै निर्धारित २० ओभरको खेलमा चार विकेटको क्षतिमा १७४ रन बनाएको थियो।बंगलादेशका लागि तन्भिर इस्लामले ४ ओभरमा १९ रन जोड्दै ५ […]
<<- Page 1 Page2Page3Page4->>